Ghostwriter Daraasadaha Jarmalka Hadda waxaan qoraa shaqo Papernerds
Daraasadaha Ghostwriter Jarmalka
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah daraasadaha Jarmalka
Haddii aad rabto inaad wax ka qabato kala duwanaanshaha luqadda Jarmalka, barashada Jarmalka waa sida saxda ah adiga. Daraasadaha Jarmalku waxay ka kooban yihiin maadooyin hoosaadyada suugaanta Jarmalka iyo afafka Jarmalka, yacni waxaad ku baran doontaa shaqooyin kala duwan oo ay qorayaasha Jarmalka ugu muhiimsan, ku milmaan taariikhda luqadda Jarmalka iyo suugaanta, oo aad ula socoto dhacdooyinka luqadeed. Daraasadaha Jarmalku waxay bixiyaan takhasus cilmiyeed iyo fursad ay ku noqdaan macallin oo qayb ka ah koorsada barbaarinta-waxqabadka Qeybta barashada suugaanta waxay ardayga uga baahan tahay edeb sare, maadaama ay jiraan aqrin badan oo la aqrin karo. Shaqooyinka caanka ah waa in la yaqaan oo la darsaa. Aqoonta daraasaadka suugaanta waa in la helaa. In kasta oo ay ku saleysan yihiin aqoonta casharada Jarmalka ee dugsiga, heerku si aad ah ayuu kor ugu kacaa. Sayniska, dhanka kale, wuxuu kakooban yahay dhanka taariikhda iyo tan casriga ah. Aqoonta codku waa aasaas. Ku dhisida tan, ardaygu wuxuu baranayaa heerarka kala duwan ee luqadda Jarmalka, tusaale ahaan. B. da'da dhexe Old Old Jarmal, ogaada oo fahan. Marka aqoonta taariikheed ay jirto, ifafaalaha casriga ah ayaa la tixgeliyaa. Taasi waxay u muuqan kartaa mid qalalan, laakiin cilmiga cilmiga luqadaha ayaa ah mid aad u xiiso badan, gaar ahaan natiijada ka soo baxda digitiraynta. Miyaad weligaa u aragtay magaalada iyo goobaha guud inay yihiin qoraal? Marka xigta ee aad aadid rootiga, iska ilaali dhamaan qoraalada yar yar, xitaa calaamadaha taraafikada iyo calaamadaha dadka araga naafada ka ah intaad emojis ku dareyso fariin qoraal ah - waxaas oo dhan waxaa wax ka qabta cilmiga luqadaha Jarmalka. Ardayga doonaya inuu dhammaystiro koorsadan waa inuu ku fiicnaadaa af Jarmalka oo uu wax badan ku barto qalbiga. Shaqo badan oo hordhac ah waa in sidaa darteed la sameeyaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan. Intaas waxaa sii dheer, tiro badan oo shahaadooyin kale ah ayaa looga baahan yahay inay ku guuleystaan ​​qalinjabinta. Shahaadooyinkan maahan kuwo dabiici u ah arday kasta waana adag tahay in la kasbado. Si caqabadaha adag ee culus ee koorsada looga gudbi karo, qaybo ka mid ah ayaa faa iido leh inuu aqbalo. Waan awoodnaa helfen. La xiriir Hada nala soo xiriir oo na sii dalabkaaga si aan markiiba kuu caawinno.
Waxaan kugu taageeri karnaa qoraallada sayniska. Qorayaasheennu waxay si dhakhso leh u aqoonsadaan cilaaqaadka sidaas darteedna waxay keenaan tayo wanaagsan. Waan caawin karnaa ardayda. Mawduucaagu waa xooggeenna. Qoritaanka qoraalkaaga ayaa kuu badbaadin doona waqti iyo shaqo. Qorayaasheennu waxay ku damaanad qaadayaan tayada. Adeegsiga adeegyadeena ayaa kaa caawin doona waxbarashadaada. Qoritaanka Shaqada guriga waa ganacsi maalinle ah. Xitaa adiga leh Warqad aqoon kororsi ah waan ku taageersanahay. Aqoonyahan cirfiid aqoonyahan ah ayaa shaqada kuu qaban doona. Tani waxay ku siin doontaa darajo wanaagsan. Hubinta khayaanada ayaa dabcan sidoo kale daboolay adeeggayaga! Ugu dambeyntiina, markaad noo shaqaaleyso qoraa ahaan, waxaad ka faa'iideysanaysaa wax kasta oo ka wanaagsan kuwa caddaaladda ah Qiimaha iyo tayada wanaagsan! Si aad ugu guuleysato koorsada, dhammaan qaybaha waa in dabcan la gudbiyaa. Tani aad ayey ugu adagtahay qaybo ka mid ah maadama maadooyinkan la baaray. Ku gudubka maadada noocaas ah ayaa ah tan ugu fiican ee kugu dhici karta. Laakiin waxaad u baahan tahay waqti kugu filan iyo dukumiintiyada lagama maarmaanka ah iyo mashquul la'aan Shaqada guriga, Waraaqaha siminaarka, der shahaadada bachelor ama shahaadada Masterka.
Qoraalka Ghost ee Jarmalka
Qorayaasheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan oo Jarmal ah waxayna horeba ugu qoreen waraaqo badan oo akadeemiyadeed ardayda kale. Shaqada tacliimeed waa inaad u isticmaashaa wakaaladdayada 'ghostwriter'. Qoraagu wuxuu raadiyaa suugaan ku habboon oo uu ku daro qoraalkiisa. Xirfadaha qoraal-gacmeedka ee qoraagu ku leeyahay abuurista qoraallada lama baran karo toddobaadyo gudahood. Way ka caqli badan tahay in loo gurmado caawimaaddan iyo in la aqbalo caawimaadda khibrad-yaqaan khibradeed. Waxaan kaa caawin karnaa aqoontayada dhaqaale. At Fragen gacantaada ayaan ku jirnaa.
Daraasadda daraasadaha Jarmalka
Suugaan badan waa in la akhriyo inta lagu guda jiro koorsada. Barashada suugaanta waa qeyb kamid ah tababarka tacliinta waana in sidoo kale la bartaa si loogu guuleysto si guul leh. A Shaqada guriga, shahaadada Masterka ama qoraalku wuxuu kaa jeedinayaa inaad u diyaar garowdo maadooyinka adag. Markaad edbinta dhammayso, waxaa jira waddooyin badan oo kuu furan. Kuwa bartay inay jeclaadaan sayniska waxay ku caddeyn karaan aqoontooda shahaado waxayna si buuxda xoogga u saaraan cilmi-baarista. Laakiin dhaqaaluhu sidoo kale wuxuu siiyaa muuqaal ballaadhan aqoonyahannada Jarmalka waxbartay. Reer Jarmalku had iyo jeer waa lagu soo dhaweynayaa hay'adaha dhaqanka maadaama ay yihiin hibooyin dhan walba ah, iyo jagooyinka maamulka ayaa si gaar ah ugu habboon. Xirfadahan ka sokow, nolosha shaqo ee daabacaadda sidoo kale waa macquul. Turjumaan ahaan ama turjumaan ahaan, waxaad ku tijaabin kartaa xirfadahaaga luqadda si ficil ahaan ah. Saxaafadda iyo saxaafadda, sidoo kale, Jarmalka wuxuu leeyahay xulashooyin badan. Xitaa shirkadaha ganacsiga, ardayda Jarmalka ee haysta shahaadooyinka bachelor-ka oo aad u wanaagsan ayaa si farxad leh loo aqbalay. Ardayda qalin jabisay waxaa la geeyay meelo kala duwan, sida; B. Tarjumaadda, (PR) la-tashiga iyo akhrinta qoraallada.
Daraasadaha Jarmalka ee nolosha xirfadeed
Rajadaada xirfadeed ee deegaankaaga ayaa aad u kala duwan. Tusaale ahaan, ka dib markaad si guul leh u dhammaysato shahaado barasho, waxaad ku bari kartaa luqadda Jarmalka iyo maadada aad dooratay dugsiga. Waxa kale oo aad ka samayn kartaa cilmi-baadhis dheeraad ah jaamacadda ama ganacsi ayaad geli kartaa.
Aagga daraasadaha Jarmalka ee shirkadaha ganacsiga
Ardaydu waxay leeyihiin fursado badan oo ay ugu habboonaan karaan suuqa shaqada. Si kastaba ha noqotee, waa inaad u hoggaansantaa muddada caadiga ah ee waxbarasho ee semestarka. Iyada oo aad u wanaagsan shahaadada bachelor miyaad aad u xiiseyneysaa shirkadaha. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada. Qalin jabiyayaashu waxay ka shaqeeyaan meelo kala duwan oo ka mid ah shirkadaha ganacsiga. Tusaale ahaan, la taliye PR ahaan, turjubaan ama tifaftiraha qoraallada. Waxaan kaa caawin doonaa inaad si guul leh u gasho nolosha xirfadeed! Na gee Kontakt on!
Hubinta tayada ee barashada Jarmalka